Nice Help | Ku Bixi Lacag
Sanduuqa Waxqabadka Bulshada ee Degmooyinka Cass iyo Clay ayaa la hawlgaliyay iyada oo laga jawaabayo cudurka faafa ee coronavirus.
Ujeedada maalgalintan ayaa ah in lagu aruuriyo tabarucaad lagu taageerayo ururada ka jira Cass County, ND, iyo Clay County, Minn., Usbuucyada iyo bilaha soo socda mashaakilka bulshada ama masiibada. Aaga loo yaqaan 'FM Area Foundation' wuxuu abuuray Sanduuqa Waxqabadka Bulshada ee Degmooyinka Cass iyo Clay sanadkii 2017.
Waxaan hadda aqbalnaa tabarucaad si aan uga caawino inaan wax uga qabanno baahiyaha waaxyada aan faa'ido doonka ahayn ee ay saameysay masiibada COVID-19. Lacagaha ayaa gacan ka geysan doona taageerida ururada samafalka si toos ah ugu lug leh wax ka qabashada baahiyaha dadka nugul, sida dadka guri la'aantu haysato, dadka dakhligoodu hooseeyo, dadka itaalka darran ama maskaxda, dadka waaweyn, dadka aqoonta liidata ee Ingiriisiga, dadka soo food saaray dhibaatooyin la xiriira lumitaan ama yaraaday. shaqada, iwm
Sanduuqa Waddooyinka ee isku xidhka Red River
Ujeedada Sanduuqa Wadada Red River (RRCF) ayaa ah in la abuuro shaqooyin iyadoo laga caawinayo ganacsatada yar yar ee North Dakota helitaanka caasimada. RRCF waxaa maalgeliya Waaxda Maaliyadda Mareykanka iyada oo qayb ka ah barnaamijka Barnaamijka Deynta Ganacsiga Yar yar ee Gobolka (SSBCI) iyada oo loo marayo Sharciga Shaqooyinka Ganacsiga Yaryar ee 2010. RRCF waxay ka kooban tahay isbahaysi oo ka kooban 36 degmo oo Waqooyiga Dakota ah oo ku soo biirey in la keeno caasimaddaan. kheyraadka ay u leeyihiin beelahooda.
Sanduuqa Gargaarka ee samafalayaasha
Haayada Bulshada : Shakhsiyaadka waaweyn, Farqiga weyn ee Bariga, & Gobolka
Si kor loogu qaado wax-ka-qabashada gobolkeenna ee masiibadaas, Hay'addu waxay abuurtay Sanduuqa Gargaarka ee aan-gaarka lahayn si ay u bixiso taageero degdeg ah loogu talogalay faa'iido-darrooyinka ay saameeyeen musiibada COVID-19 ee ku taal Grand Forks iyo Degmooyinka Walsh ee gobollada ND iyo Polk County ee MN.
Magaalada Dickinson ee United Way
Iyada oo taa laga jawaabayo, United Way waxay aasaastay Sanduuqa Taageerada Qoyska ee COVID-19, oo ah ilo u heellan qoysaska shaqeeya ee ay saameeyeen xaaladda degdegga ah ee caafimaadka bulshada.
COVID-19 Jawaabta Musiibada & Sanduuqa Soo-kabashada
Haayada bulshada agagaarka Minot
Haayada Bulshada ee Minot Area waxay hirgalisay COVID-19 Musiibada Waxqabadka & Soo-kabashada si ay u aqbasho tabarucyada sadaqada ah si loo taageero tabarucaadka ay saameeyeen carqaladeynta ka dib faafitaanka coronavirus. Sanduuqa Jawaab-celinta Musiibada & Soo-celinta Musiibada ayaa la sameeyay 2017 si wax looga qabto dhibaatooyinka bulshada ama musiibada. Mu'asasada ayaa ku deeqi doonta sanduuqa $ 25,000.
Iyada oo ah aasaaska bulshada gobolka, Northwest North Dakota Community Foundation (NWNDCF) waxay u shaqeysaa inay u adeegto oo ay u xoojiso jaaliyadaha Williams, Divide, McKenzie, iyo Mountrail County maalin kasta. Iyada oo la tixraacayo dhacdooyinkii dhowaa, NWNDCF waxay go'aansatay inay wax badan qabato, ma ahan oo keliya inay caawiso hadda laakiin mustaqbalka, iyada oo la aasaasayo Sanduuqa NWNDCF Relief Fund oo lagu taageerayo jaaliyadaha iyo macaashka sida ay ula tacaamulaan arrimaha kooban ee sababay hoos u dhaca saliidda iyo warshadaha gaaska iyo fayraska COVID-19.
Ujeeddada maalgalintan ayaa ah in la taageero kuwa sida ugu badan safka hore uga jira, Adeegyada Caafimaadka Maskaxda, Bixiyeyaasha Adeegyada Aadanaha iyo baahiyaha kale ee lagu aqoonsaday aasaaska degmada Barnes County.
Haddii aad tahay hay'ad samafal oo adeeg u fidisa dadka dhibaataysan fadlan la xiriir xafiiskayaga. Waxaan rabnaa inaan ku maqalno oo aan baranno sida ugu wanaagsan ee aan kuu taageeri karno xiisaddaan iyo ka dib.
Waxaan hadda aqbalnaa tabarucaad si gacan looga geysto sidii loo haqab tiri lahaa baahiyaha iyo caqabadaha aan faa iido doonka ah la kulmi doonin inta lagu gudajiro waqtiga aan xasilloonayn ee aafada COVID-19.
Waxaan samaynay Sanduuqa Waxqabadka Degdegga ah kaas oo xiri doona kaalmada maxalliga ah ee si firfircoon uga jawaabi doonta saamaynta fayraska COVID-19 iyo dhibaatooyinka kale ee bulshada, ee dhici kara markii ay xaaladuhu sii bataan. Iyada oo dadka caafimaadkooda ay khatar ku jiraan iyo nashaadaaddeenna maalinlaha ah ay si dhakhso leh isu beddelaan, waxaa jira dhibaatooyin hor leh oo ku saabsan derisyadeenna badan ee aan heli karin daryeelka carruurta, caymiska caafimaadka, iyo kuwa ku noolaan kara jeeg-lacag-bixin.
Sanduuqa Gargaarka Ganacsiga Yaryar
Baro waxkasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wax ku saabsan Barnaamijka Gargaarka Ganacsiga Yaryar iyo Sanduuqa Caafimadka Ganacsiga Yaryar. Halkan waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka loo baahan yahay si loogu dhex socdo dadaalkan isku-darka gurmadka ah ee ay wada gaareen GoFundMe, Yelp, Intuit QuickBooks, GoDaddy, iyo Bill.com. Samee tabarucaada si aad uga caawiso ganacsatada yar yari inay helaan deeqo.
Haayada Dakota Medical, Machadka Saamaynta, iyo Haayada qoyska Alex Stern
Sahanno taxane ah ayaa loo qaybiyey ku dhowaad 500 hay'ad samafal oo ku kala baahsan Waqooyiga Dakota iyo woqooyi-galbeed ee Minnesota si ay u qiimeeyaan sida xiisadda COVID-19 ay saameyn ugu yeelatay awooddooda si loo gaaro himilooyinkooda urur. Waxaad ku gargaari kartaa hay'adaha samafalka ee gobolka adigoo ku tabarucaya ama gacan ka geysan kara bixinta baahiyaha deg-degga ah ee gobolka oo dhan.
DMF / Saamaynta - Sanduuqa Adeegyada Critical-COVID-19
Aasaaska Caafimaadka iyo Saameynta Caafimaadka ee Dakota ayaa abuuray "DMF / Impact COVID-19 Fund Critical Services Fund" si kor loogu qaado taageero dheeri ah oo loogu talagalay ururada muhiimka ah ee caafimaadka iyo ururada adeegyada aadanaha ee gobolka. 100% doolar oo laga soo aruuriyay sanduuqan ayaa loo qeybinayaa sida deeqaha loo bixiyo Waqooyiga Dakota iyo sadaqada waqooyiga-galbeed ee Minnesota.